Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Citroen ကို Android 4.4 ကား DVD, တရုတ်အတွက် Citroen ဂ5Android မှာမော်တော်ကား DVD ၏ပေးသွင်းသူ
ဖေါ်ပြချက်:Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Citroen ကို Android 4.4 ကား DVD,Citroen ဂ5Android မှာမော်တော်ကား DVD,Citroen C4 က Android ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Citroen ကို Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Citroen ဂ5Android မှာမော်တော်ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
C3 ၂၀၁၁ အတွက် Klyde px5 android head unit  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Citroen C3 2005-2011 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 System ကိုမော်တော်ကားပေး Audio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက် Citroen C4 2005-2011 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Citroen C4 2012-2014 သည်မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Citroen C4 သည်အန်းဒရွိုက် 5.1 7.1 Quad Core  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
C4 2005-2011 ကြံ့ခိုင်ရေးကားကို DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
C4 2012-2014 canbus DVD player ထည့်သွင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRUZE 2008-2011 များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
C4 2005-2011 များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
C3 ၂၀၁၁ အတွက် Klyde px5 android head unit
C3 ၂၀၁၁ အတွက် Klyde px5 android head unit C3 2011 အတွက် Car stereo အီလက်ထရွန်နစ်တွင် New HD 1024X600 capacitive touch screen ပါ ၀ င်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရသော touch screen သည်ယခင်ကထက်တုန့်ပြန်သည်။ C3 2011 အတွက် Car stereo electronics သည် GPS...
Citroen C3 2005-2011 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 System ကိုမော်တော်ကားပေး Audio
Citroen C3 2005-2011 သည်အန်းဒရွိုက် 7.1 System ကိုမော်တော်ကားပေး Audio android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Citroen C3 2005-2011 သည် 1.Android 7.1 System ကိုမော်တော်ကားပေး Audio, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD...
အန်းဒရွိုက် Citroen C4 2005-2011 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို
အန်းဒရွိုက် Citroen C4 2005-2011 မော်တော်ကားမာလ်တီမီဒီယာ Player ကို 1.Android Citroen C4 2005-2011 ကားကို DVD Player ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Citroen C4 2012-2014 သည်မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် Player ကို
Citroen C4 2012-2014 သည်မော်တော်ကားအီလက်ထရောနစ် Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Citroen C4 2012-2014 သည် 1.Car အီလက်ထရောနစ် Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Citroen C4 သည်အန်းဒရွိုက် 5.1 7.1 Quad Core
Citroen C4 သည်အန်းဒရွိုက် 5.1 7.1 Quad Core 1. ဤသည်ကအဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ C4 2005-2011 ကြံ့ခိုင်ရေးကားကို DVD player များအတွက် HD ကို Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်,...
C4 2005-2011 ကြံ့ခိုင်ရေးကားကို DVD player
C4 2005-2011 ကြံ့ခိုင်ရေးကားကို DVD player 1. ဤသည်ကအဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ C4 2005-2011 ကြံ့ခိုင်ရေးကားကို DVD player များအတွက် HD ကို Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်,...
C4 2012-2014 canbus DVD player ထည့်သွင်း
C4 2012-2014 canbus DVD player ထည့်သွင်း 1. ဒီ, Multi-touch screen ဖြစ်ပြီး HD ကို Screen ကိုကားရေဒီယို Player ကို forC4 2012-2014 canbus အဆိုပါရေဒီယို sensitivity ကို setting ကို၏ DVD player ထည့်သွင်းမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်,...
CRUZE 2008-2011 များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီး DVD
CRUZE 2008-2011 များအတွက် Android မှာ 8.1 PX3 အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား CRUZE 2008-2011 များအတွက် Android မှာ 8.1 PX3 အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား Key ကိုအင်္ဂါရပ်များ: 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက် 2GB RAM ပါ, Quad Core & 16GB ROM...
C4 2005-2011 များအတွက် Android ကိုကားတစ်စီးဖျော်ဖြေရေး
C4 2005-2011 များအတွက် Android မှာ 8.1 PX3 အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား C4 2005-2011 များအတွက် Android မှာ 8.1 PX3 အော်တိုမာလ်တီမီဒီယာကစားသမား 1.4 x ကို 45w ပတ်ပတ်လည်စတီရီယို,2လမ်းကြောင်းဗီဒီယို input ကို,2လမ်းကြောင်းပေး Audio input ကို, 2...
တရုတ်နိုင်ငံ Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
citroen များအတွက် Android မှာ 6.0 System ကိုကားတစ်စီးအသံကစားသမား
citroen ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ်စတီရီယိုဂီတ (A2DP ဘလူးတုသ်) အတွက်ကားတစ်စီး Navi: တိုက်ရိုက် DVD ကိုယူနစ်အပေါ်ဘလူးတုသ်မှတဆင့်သင့်မိုဘိုင်းအတွက်အမြိုးသားတို့ဆော့ကစားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ နှင့်ဖုန်းစာအုပ်: သင်၏မိုဘိုင်းထောက်ခံမှု PB-download, function ကိုလျှင်သင်ထိုကဲ့သို့သော iPhone, Samsung နှင့်အခြား Android ဖုန်းများအဖြစ်အလိုအလျှောက်သင့်မိုဘိုင်းကနေဒီယူနစ်မှဖုန်းစာအုပ်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
redords Calling: ခေါ်ဆိုခေါ်ဆိုခြင်း, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုလက်ခံ Miss ခေါ်ဆိုခ
citroen ဘို့ကားတစ်စီး mp4, PB ရှာဖွေရေးရှိပါတယ်: သင်ဖုန်းကိုစာအုပ်ထဲတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင် Sears နဲ့တိုက်ရိုက်သူ့ကိုမခေါ်နိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်တစ်ခုကိုလည်ပတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, လက်ျာအမည်ရွေး, ပထမဦးဆုံးဆက်စပ်သော name ကို input ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်: citroen c3 ဘို့ကားတစ်စီးအသံကစားသမား citroen c4l ဘို့ကားတစ်စီး Navi, citroen ဂ5ဘို့ကားတစ်စီး mp4,
Citroen အန်းဒရွိုက်ကား DVD Citroen ကို Android 4.4 ကား DVD Citroen ဂ5Android မှာမော်တော်ကား DVD Citroen C4 က Android ကား DVD GMC အန်းဒရွိုက်ကား DVD